« Ny hadisoana vitako no tsy maintsy resahako raha hiresaka momba an’i George Floyd » · Global Voices teny Malagasy
Tsy ho mpiray hina mpampiteny ny hafa sy mpanandra-tena aho.
Nandika (fr) i Amaryllis Prémillieu
Voadika ny 15 Jona 2020 13:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, Ελληνικά, русский, عربي, Português, ਪੰਜਾਬੀ, 日本語, English
Sary an-drindrina natao hanomezana voninahitra an'i George Floyd, eo amin'ny rindrina ivelan'ny magazay Cup Foods, fihaonandàlana amin'ny Arabe Chicago sy ny lalankely E 38th ao Minneapolis, any Minnesota. Ireto artista ireto no nanatontosa azy: Xena Goldman, Cadex Herrera, ary Greta McLain. Natomboka ny Alakamisy lasa teo ary vita afaka ora 12 taorian'izay, niaraka tamin'ny fanampian'ireto artista ireto: Niko Alexander sy Pablo Hernandez. Sary an'i Lorie Shaull, nampiasàna ny lisansa CC BY-SA 2.0.
Ny pejy Facebook-n'ny mpanoratra no nivoahan'ny lahatsoratra niaingàna voalohany.
[Mitondra mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra raha tsy misy fanamarihana manokana]
Ny hadisoana vitako no tsy maintsy resahako raha hiresaka momba an'i George Floyd. Ny fitenanana androany, dia fiezahana hameno ny hantsan'ny fahanginana izay nisitrihako nandritra ny andro maro, nisaintsainana. Anatin'ny fotoana tahaka izao, zavadoza ny hijanona tsy hiloa-bava ary ny fahanginako tamin'ny Fahatsiarovana ny Andro Nahatongavan'ireo Indiana Voalohany [fr] dia tafiditra tanteraka ao anatin'izay tsy fahitan-teny izay. Tsy ampy ahy ny hilaza fotsiny hoe manana fifandraisana mifandrirondrirotra amin'ny maha-indiàna ahy aho dia tsy hanao na inona na inona. Lasa tena miha-manandanja be ny hanazavàna ny hoe tany aloha aho dia vavolombelona niferinaina, saingy tsy azo lavina fa nahita tombony, tamin'ireo herisetra sy fanavakavahana ny indo-karaibiàna; nahoana no ny androm-piainako manontolo, hitako ireo herisetra namelezana ny vatan'ireo mainty hoditra, taty amin'ity ilan'i Karaiba iarahany miaina ity.
Toy ny maro amin'ireo vehivavy indo-karaibiàna, sy ireo olona maro anatin'ny andian-taranaka misy ahy, ary ireo andian-taranaka teo aloha sy ny manaraka, nobeazina tao anatin'ny kolontsaina niraisana aho, izay nanindrahindra ny Fiahiahiana manoloana ireo Mainty hoditra, ary ny Fahambonian'ny Indiàna. Raha tsy ny ray aman-dreniko no nampita mibaribary sy tamin'ny fomba niniana io fisainana io (fa tsy izay akory no nisy), dia hita teny amin'ny manodidina teny foana kosa ilay izy. Takatro na dia hoe tsy nianarako akory aza fa ny zavatra ratsy indrindra (eny, « zavatra ») entinao miditra ny trano, dia ny lehilahy mainty hoditra. Takatro na dia hoe tsy nianarako akory aza fa tokony nireharehàko ny lovako ara-kolontsaina, « voatahiry tsy misy tomika », izay nisedra ny kala pani mampididoza sy ireo setrasetran'ny fifanarahana asa. Dia tonga tamin'ny fanekeko ny fanànako ny maripamantarana iray izay azoko nifonosana toy ny sari, azoko tanisaina toy ny mantra, hahandroina toy ny dhal, lalaovina toy ny any amin'ny Mastana Bahar [fifaninanana talenta], arehitra toy ny deya [fr] rehefa tonga ny andron'ny Divali [fr]. Raha ny mifanohitra amin'izay kosa, ny fivakisana sy fanjavonana voarindra nahazo ny kolontsaina afro-karaibiàna dia tsy hoe fotsiny tokony hanainga fitserana, fa koa tahotra sy fanamelohana. Hoe ny andraikitro amin'ny maha-vehivavy indiàna ahy dia ny nampita ireo lotas vita tamin'ny varahina feno ny maripamantarana ny maha-indiàna ahy ho any amin'ireo andiantaranaka hoavy, indrindra indrindra fa ireo naloaky ny kiboko, naterako avy amina vady (lehilahy) indiàna. Ny tsy fanaovana izany rehetra izany dia famadihana. Io, mazava hoazy, dia manao ahy ho toy ny mpamadika.
Aoriana kely aho vao hahafantatra fa ireo toa fahatapahana sy fanjavonan'ny kolontsaina afro-karaibiàna — izay nampifandanjaiko tamin'ireo fahazoana antoka ny maha-indiàna ahy — dia, raha ny marina, anganongano notsongaina tanaty boky fianarana avy amin'ireo mpanjanaka, fitantaràna avy amin'ny ampira iray mitazona ny toerana maha-ampira azy, isan'ireny ny : fanafenana ny marina mba hiantohana ny fahefàny sy ireo tombontsoany. Nanomboka tamin'izay fotoana izay, nalalaka kokoa ny kianja azoko nisaintsainana ny fomba nanomezan'ny fanavakavahana indo-karaibiàna ahy vàhana, nefa aho sady naneho fa rikoriko taminy, tamin'ny fomba niarovan'ny sarotrom-pahefany ahy sy ny dindony, no sady niezaka ihany, matetika tsy misy vokany, manaisotra ireo zaitra volamenany.
Misaina an'i George Floyd aho, sady misaina an'ireo fotoana nanaikerako ny molotro fony ireo dadatoako niala vonkina nitroatra noho ny fihetsika mahatsikaiky nataon'ireo mainty, ny hakamoan'izy ireny, ny tsy fahaizany, ny fombany baribariàna. Misaina ny fahanginako aho, rehefa ilay mipetraka aorian'ny taxi mitondra ahy iny, nihaino ireo lehilahy indiàna nifampizara alahelo tamiko teny amin'ireo toerana rehetra tsy tokony ho nalehako, ireo lehilahy mainty hoditra tsy tokony nifaneraseràko, io maripamantarana maha-mainty io, io mozika io, ireny hety volo na io fihoarampefy izay tsy tokony ho niriako velively io. Fantatro fa tena tsy rariny sy feno fankahalàna ireny fitenenana ireny. Eny, nanohitra aho. Ary im-betsaka, nangiana aho.
Any anatiko any aho mety miteny hoe miaro ny tenako manokana, ny tànako roa mifandipatra eo amin'ny lohaliko toy ireo tovovavy indiàna mivolontany tsara tarehy. Miaro tena amin'izay rehetra mampahatahotra ahy amin'ireo lehilahy aho, ireny lehilahy indiàna fantatro sy tsy fantatro ireny. Izany no nambarako ny tenako. Izany no ambarako amin'ny tenako. Mety ho nanao toy izany ve aho, mijoro eo an-tsisin'arabe, hijery an'i George Floyd tsy avy miaina sy miala aina mizaka ny vesatry ny lohalik'ilay hamono azy ? Ovao àry ny haingon-tsehatra ka soloy an'i Seranan'i Espana i Etazonia : mety ho izany ve no fihetsiko raha toa ka vehivavy mainty hoditra iray no niharan'ny herisetran'ny lehilahy indiàna iray mpitandro filaminana amin'ny banky iray. Tsy ananako ny valiny.
Fantatro ny hirifiriko sy ny fitondrantenako fahiny. Fantatro koa fa fahiny, tsy mba navahako ny valy bontan'ireo indo-karaibiàna manoloana ny fanavakavahana ara-drafitra ataon'ny fanjakàna sy ny fanavakavahana saranga misy eto Trinidad sy Tobago mihitsy aza. Toy ny hoe zavatra izay ihany. Tsy mitovy izany. Dia nataoko inona izay fahalalàna izay? Nampitaiko tamin'ilay zanako faralahy, izay tsy dia mbola nahalala zavatra loatra tamin'izany fotoana izany, ary dia nangataka azy aho tsy hanao ireo hadisoana tahàka izany, hanaiky ny tena soatoavina sy ny antony ilàna firaisankina. Mba hihaino tsara kokoa.
Saingy ry zareo Indiàna – na izao na taloha – dia nenjehina teto, tao anatin'ny tantaran'ity firenentsika ity, hisy avy eny amin'ny anjerimanontolo hibedy ahy anaty hafatra manokana : nenjehina noho ny amin'ny fivavahanay, ny fomba fambolinay eny ambanivolo, ny fahalemenay eo imason'ireo « Mainty Hoditra », ny sakafonay izay, talohan'ny nampahalaza azy, dia notsinontsinoavina ampahibemaso teny anatin'ireny toerana ofisialy ireny, taloha lavitry ny nanolorana dika nohamaivanina sy voatandrina fatratra amin'ny osy natono [haify indo-karaibiàna] aroso ambony lovia bakoly, teo amin'ny tokotany malalaky ny Country Club. Ho ampangaina ho tsy mahafantatra ny tantarako manokana aho. Fantatro izany, saingy haiko fa tsy hahafa-tsiny ahy izany.
Ampy tsara ny fahalalàko mba hamantarako ilay tànana lava, tena lavan'ny ampira izay mandrakotra eo amboninay rehetra, na lahy na vavy, eo ambonin'ny olona rehetra mitondra ny lokon'ireo zanatany taloha tao Karaiba. Ny fomba nataony namatorana anay sy nampanompoiny anay tamin'ny fampiasàna teknika mitovy sy hafa ihany koa tamin'ny hoditray, miasa any anaty tokantrano sy ny fonay any, eny ambony alitaranay, any anatin'ireo fitaovana kirakirain'ny tananay rehefa eny an-tanimboly, any an-trano fiangonana, efitrano ary ireo nodimandry fony vanimpotoana fanjanahana.
Tsy manafaka ahy ho tsy manantsiny ireny rehetra ireny. Tsy hahatonga ahy ho Amerikàna ireny, na ho vehivavy Mainty Hoditra any Amerika. Tsy ahafahako mametraka ny tenako ho amin'ny toeran'i George Floyd, ho ao anatin'ny vatany, hiaina ny fifaliany isanandro, ireo fahasahiranany na ny horohorony tamin'ny fotoana nahafatesany, nandritra ireo minitra maro nialàn'ny ainy.
Arakaraky ny ahafantarako, na tsy ahombiazako amin'ny fianarana ataoko, no sady am-panantenana hoe ireo tsy fahombiazako dia hitondra ahy ho aminà fomba mendrika indrindra hijoroana ho vavolombelona noho ireo herisetra ataon'ny pôlisy, ny fanavakavahana feno herisetra sy iniana atao amin'ireo olompirenena mainty hoditra, ary ny zava-mahatsiravina ateraky ny fanavakavahana eny anivon'ny pôlisy, dia manolo-tena hihaino indray aho. Handohalika eo an-tongotr'ireo vehivavy, ireo olona tsy lahy tsy vavy sy ireo lehilahy mainty hoditra – ireo mpanoratra, ireo mpihoko, ireo mpihevitra –, ary dia mihaino an-dry zareo.
Ny filonako anatin'ny ràn'i Audre Lorde, sy James Baldwin, sy Paule Marshall, sy Malcolm X, sy Michelle Alexander, sy Reni Eddo-Lodge, sy Zora Neale Hurston, ary i Marlon James nefa sady tsy ho mpiray hina mila kisa sy te-ho deraina.
Tsia, angatahako mihitsy ny tenako amin'izay, tsy ho mpiray hina mpampiteny ny hafa sy mpanandra-tena.
Tsy misy fakàna na fibodoana fitenenana amin'ny toeran'ny hafa, tsy hitehaka noho ireo rà latsaka, na mety ho izaho ihany aza no nanao sorona an'izany.
Haiko fa tsy ho isak'izay mihetsika no hahomby aho, saingy tsy vitako ny hanofahofa ka tsy hahaloko mena ny fanevan'ireo – lahy sy vavy – izay mandray am-pitiavana ny tsy fahombiazany, araka izany dia tsy mendrika ahy ny ho mpitondra tenin'ny tolona, na inona izay na inona.
Ny faneva izay noforoniko no entiko mba hampitàna ny fomba fijery pôlitika ananako sy ny feoko, izay tsy afaka ny hangiana, ao anatin'ny fifamahofahoany miolakolaka sy feno tsilo.
Asandratro izy io ho an'i George, Trayvon, Tamir, Sandra, ary Tony. Ho an'ireo Amerikàna Mainty Hoditra. Omeko ho azy ireo ny firaisako hina indo-karaibiàna tena tsy lavorary. Atolotro azy ireo amin'ny fanantenana hoe hanonitra sy mba hiverina hadio ireo tànako, izay tsy hoe tsy misy pentina, amin'ny anaran'ny tolona.
Mba ho haiko anie ny hianatra hanome rà ho tambin'ny trosako.